Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Fahasalamana fa tsy Frantsa na polisy e !
INTY SY NDAY : Fahasalamana fa tsy Frantsa na polisy e !
Mahalasa fisainana mihitsy ny trangan-javatra sasantsasany eto an-tany, ary isan’izany ny fifandraisana iraisampirenena. Namoaka fanambarana tokoa ny masoivohom-panjakana frantsay eto Madagasikara ny alarobia teo fa “tsy mahazo alalana hiditra any amin’ny lafin-tany frantsay ny olona avy amin’ny firenena hafa raha tsy mahavita manaporofo fa vita fanefitry ny aretina coronavirus”. Nomarihiny anefa fa maromaro ireo vakisiny fanefitra ankatoavin’i Frantsa fa tsy mba isany ny “Covishield”.
Dia nikoropaka ny olona sasany hoe “dia ahoana izany?” Aoka hotsorina fa ny an’ny olona sasany tokoa dia tsy ny fahasalamany no zava-dehibe aminy ka nanosika azy hanao vakisiny fanefitry ny coronavirus fa ny hahazo alalana hiditra any Frantsa na any amin’ny firenena hafa any ivelany. Mampalahelo ilay fisainana. Mampahatsiaro an’ilay tahotry ny olona ny polisy ka mahavoatery azy hanao aro-vava-orona eny an-dalambe, satria mety ampanaovina asa eny an-dalambe. Tsy ny fiarovan-tena tsy ho tratr’ilay aretina coronavirus no nanosika ny olona sasany hitondra ny aro-vava –orona fa ny tahotra polisy.
Aza atao an’izany re ilay raharaha fa manahirana e! Na ny frantsay aza dia tratran’io toetsaina hafahafa io. Marina fa fiarovan-tena na fiarovana ny vahoaka frantsay no nahatonga ny fanjakana frantsay ho namoaka iny fanambarana iny satria tsy azon-dry zareo antoka hahitam-pahombiazana izany ny vakisiny fanefitra “covishield”. Ny tokony nataon’ny fanjakana frantsay dia ny nanentana ny mba hampiasana ny vakisiny fanefitra mety aminy sy azony antoka. Ny mahalasa fisainana mantsy dia isan’ireo tompon’andraiki-panjakana vahiny tonga nitsena ny vakisiny fanefitry ny coronavirus “covishield” ny masoivohon’ny Vondrona Eraopeana eto Madagasikara tamin’ny fahatongavan’io vakisiny io teto, ary tsy hoe nihainohaino lavitra na nitsikilokilo tany ambadika tany fa isan’ireo nitondra sy nampiseho mihitsy ny sora-baventy hoe “covax”, izay miendrika fanentanana ny Malagasy hanam-piniavana hatao vakisiny fanefitra. I Frantsa dia isan’ny ao anatin’ny Vondrona Eraopeana.
Raha izao no fandehany dia mety samy hitaky ny fahavitan’ny vakisiny fanefitra metimety aminy avokoa ireo firenen-dehibe efa nahita vakisiny, na ny sinoa na ny rosiana na ny amerikana na ny eraopeana, sy ny sisa, dia ireo mpivezivezy any ivelany, voatery hanao vakisiny araka ny tany halehany.
Na izany na tsy izany, mampametra-panontaniana ny maro ny fahafahan’ireo tompon’andraikitra ara-panjakana na tompon’andraikitra politika avy eto Madagasikara nahazo alalana hiazo ny any ivelany nefa toa tsy nazoto na tsy nety nanao vikisy fanefitry ny coronavirus. Sa misy tombon-jo ara-diplaomatika (immunité diplomatique) koa ny vakisiny fanefitry ny coronavirus?
Ny fahasalamana no zava-dehibe ary tsy ny malagasy 26 Tapitrisa no hieritreritra ho any ivelany avoakoa. Rehefa ny fahasalamana no zava-dehibe dia ezaho ho voahaja ireo fepetra efa natao hatrizay fa hatreto dia voaporofo fa maty ho azy io tsimokaretina io rehefa voahaja ny fepetra voafaritra hatrizay, miaraka amin’ny fampiasana ireo antoka mampitombo ny hery fiarovana ao amin’ny tenantsika, toy ny sakamalaho, voasary makirana, tantely, ravintsara…